Adala toa izany koa ianao? : Martin Vrijland
Adala toa izany koa ianao?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 2 September 2019	• 7 Comments
Adala toa izany koa ianao? Ahoana ny? Momba ny zava-misy tsotra izay saika manodidina ny olona rehetra dia mbola mino fa raharaha marim-pototra ny politika. Mihevitra ny olona fa misy ny demokrasia. Tsara ianao mety mieritreritra:Mino koa aho fa mino izany koa. Mety tsy handeha amin'ny lalana tokony itiavany azy akory izany fa tena miaina amin'ny demokrasia marina". Azoko atao ve ny manontany anao ny hanohizanao ny lohany amin'ny fasika mafana miaraka amin'ny sisa amin'i Holandy? Na koa mbola namaky kely kokoa, noho ny fahaliananao tsy azo ivalozana?
Tena fotoana tokony hahitana an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Ny fomba fijerinao izao dia miloko tanteraka. Avy amin'ny kianja mankany amin'ny 'eto sy ankehitriny' ianao dia voatsindry miaraka amin'ny fijerena tontolo izay diso. Manomboka amin'ny ray aman-dreninao izay efa nanamboatra ny tenany ary namindra ny fandaharam-pianarana ho anao. Na dia mety nikomy tamin'ny fomban'izy ireo na fety ara-politika aza izy ireo. Angamba izy ireo dia nifindra avy tany PvdA mankany Groenlink na tena hippies marina aza.
Namboarina nandritra ny androm-piainanao miaraka amin'ny fahitana fijery izay voafaritry ny fampianarana, ny media, ny mozika, ny filma, ny gazety, ny radio, ny Internet, ny Facebook, sy ny sisa. Raha mieritreritra ianao izao:Eny, mitombina izany. Samy miaina ao anatin'ny tontolo iray ihany isika rehetra, noho izany dia samy mahita zavatra mitovy na kely kokoa isika. Amin'ny ankamaroany avy amin'ny zoro hafa; raha teraka tany amin'ny firenena hafa ianao, fa miaina ao anatin'ny tontolo iray ihany isika rehetra". Mety fotoana izao hitanao fa ny zavatra rehetra voan'ny maso sy ny sofinao nandritra ny androm-piainanao dia tsy tarihin'ny vondrona vitsy kely. Mety ho olona an-tapitrisany no miasa amin'ity klioba kely ity, fa olona an-tapitrisany ireo dia miankina amin'ny asany ary miasa amin'ny ampahany kely izy ireo ka tsy voadin'izy ireo ilay sary lehibe. Fa ambonin'izany rehetra izany, izy ireo ihany koa dia efa namboarina hatramin'ny fahazazana ka tsy mahalala tsara kokoa ary, toa anao, dia mino an'io zava-misy diso io.
Nino koa angamba ianao fa ny tranon'ny mpanjaka dia tsy misy lazaina. 'Ny tranon'ny mpanjaka dia fombafomba fotsiny. Manan-danja ny asa fivarotana lehibe izy ireo, satria mandeha amin'ny asa fivarotana mankany amin'ny firenena hafa izy ireo ary avy eo dia haka manager avy amin'ny orinasa lehibe izy ireo mba hiverina miaraka amin'ny fifanarahana lehibe. Tena manan-danja tokoa izy ireo amin'izany. Tena tena ilaina ho an'ny firenentsika izy ireo.'Naritako tsara ny sarinao ve ny fianakavian'ny mpanjaka holandey? Raha vehivavy ianao, dia mety efa nanao nofinofy momba an'i Cinderella sy ilay andriana tamin'ilay soavaly fotsy, ary mety nijery ny kalesy volamena sy ny Andron'ny Prince tao amin'ny fahitalavitra niaraka tamin'ny mason-tsakafon'ny paiso ny reninao. Mbola afaka mitatitra imbetsaka ve aho aorian'izay? Ianao dia voatsindry miaraka amin'ny sary iray izay tsy mifanaraka tanteraka amin'ny zava-misy.
Ny masoivoho tsirairay, mpisolovava, miaramila, mpiasam-panjakana, mpitsara, minisitra, mpiandraikitra mpanao famotorana miavaka (BOA) - sy ny sisa - dia mianiana amin'ny tsy satro-boninahitra. Toy izany koa amin'ny fianakavian'ny mpanjaka. An'iza ny sonia rehetra? Eny, ny an'ny mpanjaka. "Eny, saingy ireo lalàna ireo dia vokarina amin'ny alàlan'ny demaokratika ary misy ny fifanakalozan-kevitra momba izany ary amin'ny farany dia ho tonga amin'ny zavatra voafehin'ny fifanarahana eo amin'ny antoko politika lehibe indrindra ianao. Ary ireo antoko ireo dia mampiseho ny feon'ny vahoaka aorian'ny valin'ny fifidianana". Mbola mino izany ianao, sa tsy izany? Firy taona ianao? Firifiry ny governemanta hitanao? Fa ianao mbola mino io?
Mino ve ianao fa ny fifanakalozan-kevitra amin'ny radio sy ny TV, toa an'i Jeroen Pauw, Eva Jinek na DWDD dia manamarina tanteraka? Tsy mino ianao fa mety hitarika tari-dàlana kely kokoa? Fantatrao tsara fa ireo olona izay eo amin'ny latabatra ireo dia tsy ao amin'ny iraka ary ny fifanakalozan-dresaka dia eo ihany no manohana ny fisehon'ny tsikera na hampiala ny fifanakalozan-kevitra amin'ny tena fanontaniana fototra?
Voamarina tsara isika, tsy maintsy ekeko. Ohatra, fantatro avy amin'ny fiakaran'ny Forum for Democracy (FvD) Thierry Baudet fa ity dia fahefana manan-kery tsara. Olona mety hanana fanoherana tena azo itokisana. Rehefa mahita fandaharana fifanakalozan-dresaka amin'ny fahitalavitra ianao dia tena mieritreritra fa azo itokiana ary misy farany tsy sahy mitsikera mafy. Tsy mba hikapoka ny tratrako ihany fa lazaiko anao fotsiny izany ho toy ny fanoharana. Rehefa dinihina tokoa, dia nanambara aho fa ny fisondrotan'ny FvD dia tsy natao ary natao hanonganana ny tsikera fotsiny eo amin'ny fiaraha-monina, amin'ny fampifandraisana azy amin'ny 'mahitsy, fisainana tsikombakomba, fanindrahindram-pirenena ary tsy firaisan'ny vehivavy', ary avy eo hametraka ny baomba ao anaty rivotra. manova ny farany ambany. Izahay dia mahita ny dingana mitovy amin'izao tontolo izao. Vakio mialoha ity lahatsoratra ity indray mandeha tsara.
"Vrijland tsara, tsara izany fitsikerana rehetra izany, fa inona kosa no tokony hataontsika?"Raha manontany ahy ianao ka hanomboka, dia fotoana izao dia manomboka mahita ianao fa ny sarinao manerantany dia sary loko ivelany tanteraka: sary voarafitra. "Eny, tsara ary!? Miaina eto amin'ity tontolo ity aho, izay no dikany?"Eny, mitombina izany, satria efa nandalo fandaharana izahay rehetra. Midika ve izany fa tsara? "Eny, saingy tsy te ho lasa maverick ihany koa aho. Avelao aho handray anjara amin'ny ambiny!”Mety ho ianao, saingy manana fahatsapana ve ianao fa manao izao tontolo izao tsara? Tsy miresaka ireo fety mahafinaritra izay tsidihanao ianao mandritra ny vanin-taona mafana sy iny fialantsasatra mahafinaritra 2 herinandro sy izay labiera rehetra sy ny toy izany. Miresaka momba ny firon'izao tontolo izao aho amin'ny resaka fandoavana hetra, tontolo iainana, ady, aretina sy ny sisa. Mieritreritra ve ianao fa mandeha tsara ny zava-drehetra ary i Holandy dia firenena tsara tarehy miaraka amina rafitra tsara tarehy.
Eny, angamba ianao ao anatin'io rafitra inoana io:We Dutch dia manana be dia be ny tambajotra làlana tsara indrindra eran'i Eoropa. Manana fitsipika tena tsara isika, ohatra, momba ny fananganana, manana haratoka fiarovana ara-tsosialy tsara ary kalitao tsara indrindra. Mpandraharaha iraisam-pirenena isika ary politika ary kaonty dia tsara be". Tena tsy andriko mihitsy (raha mieritreritra izany ianao) dia eto amin'ity tranokala ity mihitsy, saingy mety ho io mpamaky io ianao. Ireo olona izay mino an'io matetika io dia manana fahasarotana lehibe indrindra amin'ny famaranana ary misy maro any Holandy no mijaly amin'ny antidepresanina, fa ny avonavona amin'ny fahafantarana fa misy zavatra tsy mety any amin'ny toerana iray dia mety ho porofon'ny 'andevo tena lafatra'. Na dia akaiky aza ny harerahana: mitazona saina mena izahay amin'ny andro Andron'ny Prince ary manohy mino ny rafitra izay mametraka fihenjanana be loatra izahay.
Ny famintinana fohifohy indrindra azoko omena anao, izay mety ilainao mba hamita anao, dia:
Ny tontolon'ny tontolonao dia loko ny vondron'olona vitsy izay manana fahefana amin'ny fampianarana sy haino aman-jery rehetra ary mitazona ny hevitry ny fahalalahana voafidy eo ambanin'ny anaran'ny demokrasia. Ny mpanao pôlitika dia mpisehatra voaofana tsara izay mahay mamaly ny filana sy ny tsiron'ny fiaraha-monina. Ny haino aman-jery dia afaka manoritra ireo tsiro ireo ary afaka manasokajy azy ireo. Misy ny haino aman-jery sy ny media sosialy mba hitarihana ny fomba fijerinao ary ny latsa-bato. Ny haino aman-jery sosialy dia arahi-maso tanteraka ny 'reaguurers' izay mety mitondra ny lohateny hoe Inofizieller Mitarbeiter ao amin'ny GDR teo aloha. Ny fihetsiky ny Facebook sy Twitter matetika dia fehezin'io tafika io, izay miafina ao ambadika profil lalina. Ny sarinao manerantany dia miloko manontolo amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao, magazine, radio, TV, filma, mozika sns. Mipetraka ao anaty iray ianao Trumanshow iombonana; zava-misy diso.
"Tsy mino fotsiny aho any Vrijland. Tsy mampaninona ahy loatra izany. Tsy milaza amiko ianao fa be dia be ny olona mandray anjara amin'ny lainga". Tsy fantatry ireny olona ireny fa miara-miasa izy ireo, satria faritra kely misy kely fotsiny izy ireo ary tsy misy miandraikitra ny sary lehibe. Raha hidiranao lalindalina kokoa (ohatra amin'ny alàlan'ireo lahatsoratra eto amin'ity tranokala ity) dia ho hitanao fa diso ny fahitan'ny tontolonao. Tandremo, satria mety ho voatarika ao amin'ny haraton'ny fiarovana ny fiaraha-monina marina ihany koa ianao. Ilay sakana kely izay mifehy an'izao tontolo izao koa dia manana ny fanoherana ao anaty paosiny. "Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny mpanohitra dia ny mitarika azy ioNy valin-tenin'izy ireo. Niresaka an'izany aho, ankoatra ny zavatra hafa ity lahatsoratra ity.
Raha nanao olana amin'ny famakiana ireo lahatsoratra ao ambanin'ny rantsankazo manga ianao (4 ihany izy ireo) dia tonga amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny fomba hahitantsika izao tontolo izao. Ahoana no ahitàna ny tena zava-misy raha marina ny fehin-kevitra fa nitazona antsika amin'ny karazana nofy foana isika hatramin'izao? Nanoratra lahatsoratra maromaro momba an'io lohahevitra io aho, fa hahita ny tena ela indrindra eo ambanin'ny lohateny hoe 'Fampahalalana momba ny famonjena ny fiainanao' ary eo ambany ity rohy ity. Te-hiteny aminao aho fa manao an'io ezaka rehetra io aho hanondroana anao tsy misy liana. Nandoa ahy aza izany. Tsy misy ny antony manosika ara-pinoana ao ambadika (mino aho fa ny finoana dia fifehezana ny saina) ary tsy misy antony manosika ara-bola ao ambadika. Manao izany aho satria mieritreritra fa izany no hany fomba fanovana. Noho izany, vakio ny lahatsoratra eo ambanin'ny rohy manga ary avelao aho handre izay hevitrao.
Taratasy misokatra ho an'ny governemanta sy ny haino aman-jery: fametraham-pialana sy fanenjehana amina fitsarana ao amin'ny vahoaka
Victor Specials New Year Special dia nanazava sy ny fomba iarahanao isan'andro amin'ny Mindf * ck
Mark Rutte nirehitra momba ny famokarana gazy any Pauw sy Jinek
Isika dia manohy mandray ny Trumanshow momba ny politika sy ny media loatra
Tags: Featured, haino aman-jery, politika, Truman Show, diso. zava-misy
Dick Klein Oonk nanoratra hoe:
2 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 45
Lahatsoratra tsara iray mazava, Martin. Afaka miombon-kevitra tanteraka aho. Noho izany dia zaraina amin'ny Twitter sy FB.
3 Septambra 2019 ao amin'ny 00: 35
Ny demokrasia dia fandrika.
3 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 59
Tsara angamba ny mahafantatra voalohany fa toy ny any Angletera, ny endrika misy antsika dia tsy demokrasia fa fitsaram-bahoaka mifehy. Manana anjara andraikitra amin'izany ny mpanjaka / mpanjakavavy. Ohatra tsara dia ny Angletera izay nolazain'i Johnson fa nangataka ny fampiatoana ny parlemantera. Moa ve izany toe-javatra izany na miloko na tsia ity scenario ity? Izany angamba no nanatanterahana ny lalàm-panorenana izay nanapahain'ny filoham-pirenena Privey ny hampiato ny parlemanta. Ity tranga ity dia azo antoka kokoa noho ny iray aseho amintsika.
Angamba tsy i Martin izay mamaritra ny teatra manontolo, fa mbola ……. Nihevitra aho fa ohatra iray izay ahitana antsika rehetra sary miaraka amin'ny sary izay indraindray tsy marina.
3 Septambra 2019 ao amin'ny 09: 36
Lovia savony izy io.
Jereo hoe iza no mipetraka eo amin'ny sezafiandrianana ao Brussels (ampidiro 'Ursula' eo amin'ny sehatry ny fikarohana amin'ity tranonkala ity).
Ny arristokrasia no manapaka ary manafina ao ambadiky ny fisehoan'ny demokrasia (toa ny mifanohitra) toa ny vidin'ny haino aman-jery (milina fampielezan-kevitra) sy ireo mpisehatra izay heverintsika fa hiantso ny 'mpanao politika'.
Ny Brexit dia natomboka mba hampiseho ny sisa amin'ny Eropa fa ny fanoherana ny fanatontoloana dia mitarika ny fahantrana sy ny sazy ara-bola ary hitondra ny kilaoty sy ny euro amin'ny ambaratonga mitovy.
Nilalao nandritra ny fotoana kelikely ny lalao: hahazoana fahatokisana.
I Johnson dia mety ho lasa hardliner vetivety.
Tsy inona fa hafa ny fihetsika.
3 Septambra 2019 ao amin'ny 16: 25
3 Septambra 2019 ao amin'ny 23: 17
Ny zavatra ataon'izy ireo isan'andro dia ny manipy baolina amin'ny fanantenana fa hanaiky azy isika. Efa nanaiky be tato anatin'ny taranaka faramparany isika izao ka miaina ao anatin'ny tontolo tsy mitombina sy tsy rariny.
Raha mbola miady ny mpanjakany (fivavahana) ihany ny miaramila (mivarotra ny fanahy ho amin'ny fanahy) dia mbola hitohy ny ady. Ireo dia iharam-boary izay miteraka angovo ratsy. Tsy mandray anjara intsony amin'ny fombafomba fahatsiarovana, mifantoka amin'ny herinao etsy sy eroa.
Ny fitaka (fitaka) hianjatsika ho an'ny taloha no natsipy taloha. Izany no antsoina hoe ota, ota amin'ny fotoana 😉
4 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 23
Marina fa demokrasia isika izay tsy inoako intsony elaela, dia miaina ao anaty fanjakana mpanao heloka bevava isika.
« TOROHEVO: ny rejuvenation pill dia zava-misy! 80 Ny lehilahy iray taona dia nitelina voalohany taorian'ny fitsapana biby
Ny ady lehibe Brexit dia drafitra efa voarindra mialoha »
Total visits: 12.375.441
Karel Reuterz op Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersma ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
Caesar Lion Cachet op Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?